Horyaalka Spain: Barcelona Oo Barbaro Lagu Qabtay Iyo Kulamada Kale Ee Laga Ciyaaray Horyaalka
Home Horyaalka Spain Horyaalka Spain: Barcelona oo barbaro lagu qabtay iyo kulamada kale ee laga...
Barcelona guud ahaan iyaga ayaa kubadda haystay balse meel ay marsiiyaan ayay waayeen waana adkeyd in si sahal ah u gaaraan goosha Eibar .
Heerka kubada haysashada Barcelona waxa ay gaareysay %70 , waxaana biloowgii rigoore ka qasaariyay Braithwaite waxa ayna aheyd daqiiqaddii 5-aad halka 28-aad Var ay ka diiday gool ay dhaliyeen .
Eibar waxa ay ciyaarayeen kubad deggan oo daafac ahaan aad ayay u wacnaayeen waxaana lagu nastay bar bar dhacaas bilaa goolasha ah
Eibar qeybta labaad dhaq dhaqaaq wacan ay soo bandhigeen Barcelona fursado waa laga bad baadinayay balse hanaanka ciyaarta waxa ay u muuqatay mid gool uu ku imaan doono .
Barcelona , waxaa lagu dilayay kubadaha rogaal celiska ilaa ay ku keeneen gool laga dhaliyay daqiiqadii 57-aad balse Barcelona waa ciqaabeen kooxdaas Eibar ilaa ay ku keeneen goolka bar bar dhaac daqiiqadii 67-aad waxaana saxixiay Dembele .
Barca si waliba ayay u daadaaaleen balse nasiibka guusha ayaa ka maqneyd waliba dhamaadkii fusradi xaqiiq ah ay qasaariyeen waxa ayna ciyaarta ku dhamaatay min halkaas gool.
Kulamada laga ciyaaray Horyaalka La Liga
Previous articleHoryaalka Premier League: Arsenal oo guul ka gaartay Brighton iyo Man Utd oo bar-baro lagu qabtay
Next articleFalanqeynta Kulanka Newcastle United Vs Liverpool: The Reds oo dooneysa in guulaheeda ku soo laabato